Umkhiqizi we-Marshmallow Line | I-yinrich
Ikhaya > Imikhiqizo > Umugqa Wokukhiqiza ama-Marshmallow > I-Marshmallow Line
Le khasiI-Marshmallow Line ilawulwa ngokuqinile yiqembu lethu lobuchwepheshe. Ama-candies akhiqizwayo anokunambitheka okungcono nekhwalithi.
I-Marshmallow Line ye-Marshmallow isetshenziselwa ukukhiqiza i-marshmallow, i-toffee neminye imikhiqizo evuthayo ye-Pipi. Ukucindezela komoya okushukumisayo kunama-candiform mannsity, ukunwebeka okuhle nokunambitheka okuhle. I-Cotton Candy Depositing Equipment Internet inokusebenza kahle okuphezulu nokusebenza okulula. Ingafakwa ngamasethi ayi-1-3, i"UJam ugcwale umshini owenziwe we-marshmallow" isetshenziswa ngasikhathi sinye. I-MarshMallow Line elula ilula ukusebenza, okuphezulu kokukhipha, futhi ingakhiqiza ama-marshmallows asezingeni eliphakeme ngokwamukela ifomula yezobuchwepheshe.
I-Yinrich ngumkhiqizi we-marshmallow umugqa obekelwe, umshini wokufaka ama-marshmallow. I-Marshmallow Line ye-Marshmallow inesakhiwo esinengqondo nehlazo kanye ne-degree ephezulu ye-automation.
I-JZM120 (90 ~ 120kg / h) umugqa we-marshmallow
I-JZM200 (120 ~ 150kg / h) I-Marshmallow Line
Ulayini we-marshmallow obekiwe
Uchungechunge lwe-JZM yisitshalo lapho isiraphu evunguza umoya ingajovwa khona futhi ixutshwe nombala nokunambitheka, bese iya kokukhethekile okuklanyelwe ukufaka imali ekwenzeni imikhiqizo efakiwe. I-YINRICH ibuye ihlinzeke ngophiko oluhlanganayo lokulungiselela ama-athikili agcwele isikhungo. Ijeli liyaphekwa bese lihlanganiswa nombala, ukunambitheka, ne-asidi. Ingafakwa ngokuphelele ngaphakathi kwe-marshmallow ukwenza i-jelly centre egcwele i-marshmallow.